Etu ị ga-esi zuru ike n'ime Onyenwe anyị mgbe ụwa gị tụgharịrị | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Otu esi zuru ike n’ime Dinwenu mgbe ụwa gị tụgharịrị
di Paolo Tescione - Septemba 18, 2020
Omenala anyị na-agbakwunye na oke iwe, nrụgide na enweghị ụra dị ka baajị nke nsọpụrụ. Dịka akụkọ na-akọ mgbe niile, ihe karịrị ọkara ndị America anaghị eji ụbọchị ezumike ha ekenye ha ma ha nwere ike iso ha rụọ ọrụ mgbe ha mere ezumike. Ọrụ na-enye njirimara anyị nkwa iji kwenye ọnọdụ anyị. Ihe na-akpali akpali dị ka caffeine na shuga na-enye ụzọ iji na-agagharị n'ụtụtụ ka mkpụrụ ọgwụ ụra, mmanya na ọgwụ ọgwụ na-enye anyị ohere iji ike mechie ahụ na uche anyị ka ụra hie ụra tupu ịmalite ọzọ. , dị ka motto na-aga, "You nwere ike ihi ụra mgbe ị nwụrụ." Mana nke a bụ ihe Chineke bu n’obi mgbe O kere mmadụ n’oyiyi ya n’ogige? Gịnị ka ọ pụtara bụ́ na Chineke rụrụ ọrụ ụbọchị isii wee zuru ike n’ụbọchị nke asaa? N’ime Akwụkwọ Nsọ, ezumike abụghị naanị enweghị ọrụ. Ihe ndị ọzọ na-egosi ebe anyị tụkwasịrị obi maka inye, njirimara, ebumnuche na mkpa. Ihe ndi ozo bu ihe eji eme oge anyi na nke izu anyi, ya na nkwa nke nwere mmezu di n’iru: “N’ihi ya, ezumike nke izu ike diri ndi nke Chineke, n’ihi na onye obula banyere n’izu ike nke Chineke ezuwokwa ike. oto ke utom esie nte Abasi okonode utom Esie ”(Mme Hebrew 4: 9-10).
Gịnị ka izu ike n'ime Onyenwe anyị pụtara?
Okwu e jiri maka Chineke zuo ike n’ụbọchị nke asaa na Jenesis 2: 2 bụ Sabbathbọchị Izu Ike, otu okwu a ga-eme ka akpọọ Israel ka ha kwụsị ọrụ ha na-eme. N'akụkọ okike, Chineke ewepụtala otu esemokwu a ga-agbaso, ma n'ọrụ anyị ma n'izu ike anyị, ka anyị wee nwe ike ịba uru na ebum n'uche anyị dịka e siri kee n'oyiyi Ya. Chineke weputara oge n’ụbọchị okike nke ndị Juu na-aga n’ihu na-agbaso, nke gosipụtara ọdịiche dị n’echiche America banyere ọrụ. Dika akowara oru okike nke Chineke na akuko Jenesis, uzo esi ejedebe kwa ubochi kwuru, “O wee buru mgbede ma nwekwa ututu. A gbanwere usoro a banyere otú anyị si ele ụbọchị anyị anya.
Site na mgbọrọgwụ ọrụ ugbo anyị rue na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ugbu a na teknụzụ ọgbara ọhụrụ, ụbọchị na-amalite n'isi ụtụtụ. Anyị na-amalite ụbọchị anyị n'ụtụtụ ma mechaa ụbọchị anyị n'abalị, na-etinye ike n'ehihie iji daa mgbe arụchara ọrụ ahụ. Yabụ kedu ihe pụtara na ị na-eme ụbọchị gị na nke ọzọ? N’obodo ndi agrarian, dika odi na nke Jenesis na otutu akuko banyere mmadu, mgbede putara izu ike na ihi ura n’ihi na ochichiri ma i nweghi ike oru n’abali. Usoro okike nke Chineke na-atụ aro ịmalite ụbọchị anyị zuru ike, na-ejuputa bọket anyị iji kwadebe ọrụ ahụ n'echi ya. N’itinye anyasị nke mbụ, Chineke gosiri mkpa nke ibute ezumike nkịtị ụzọ dị ka ihe dị mkpa maka ọrụ dị irè. Na ntinye nke thebọchị Izu Ike, kaosiladị, Chineke ewepụtala ihe dị mkpa na njirimara na uru anyị (Jenesis 1:28).
Hazi, ịhazi, ịkpọ aha na idobe ezi ihe ndị Chineke kere eke na-eme ka ọrụ mmadụ dị ka onye nnọchi anya Chineke n’ime ihe okike Ya, na-achị ụwa. Ọrụ, ọ bụ ezie na ọ dị mma, a ga-ejigide ya na izu ike ka nchụso anyị na-arụpụta agaghị na-anọchite anya ebumnuche anyị na njirimara anyị. Chineke adighi-ezu ike n’ubọchi nke-asa n’ihi na ubọchi isi nke ihe ekère èkè g woreburu Ya ike. Chineke zuru ike ka O setịpụ ihe nlere iji gbasoo iji nwee ọ enjoyụ ịdị mma nke ihe anyị kere eke na-enweghị mkpa imepụta ihe. Otu n’ime ụbọchị asaa gbara izu ike na ịtụgharị uche n’ọrụ anyị rụchara chọrọ ka anyị mata na anyị dabere n’ebe Chineke nọ maka ndokwa Ya na nnwere onwe ịchọpụta njirimara anyị n’ọrụ anyị. Na ịmepụta thebọchị Izu Ike dị ka iwu nke anọ na Ọpụpụ 20, Chineke na-egosipụtakwa ihe dị iche na ndị Israel na ọrụ ha dị ka ndị ohu n'Ijipt ebe arụ ọrụ dị ka ihe isi ike n'igosi ịhụnanya na ndokwa Ya dị ka ndị Ya.
Anyị enweghị ike ime ihe niile. Anyị enweghị ike imecha ya niile, ọbụlagodi awa iri abụọ na anọ n’ụbọchị na ụbọchị asaa n’izu. Anyị ga-ahapụrịrị ngbalị anyị iji nweta njirimara site na ọrụ anyị ma zuo ike na njirimara nke Chineke na-enye dị ka Ọ hụrụ n'anya ma nweere onwe anyị izu ike na nduzi na nlekọta Ya. Ọchịchọ a maka nnwere onwe site na nkọwapụta onwe onye bụ ihe ndabere maka Fall ma na-aga n'ihu na-emekpa arụ ọrụ anyị n'ihe metụtara Chineke na ndị ọzọ taa. Ọnwụnwa nke agwọ ahụ nyere Iv ekpughere ihe ịma aka nke ahụ riri ahụ na-atụle ma anyị ga-ezu ike n'amamihe Chineke ma ọ bụ na anyị chọrọ ịdị ka Chineke ma họrọara onwe anyị ezi na ihe ọjọọ (Jenesis 24: 3). N’ịhọrọ iri mkpụrụ osisi ahụ, Adam na Iv ahọrọwo nnwere onwe kama ịdabere na Chineke ma nọgide na-agbaso nhọrọ a kwa ụbọchị. Oku nke Chukwu zuo ike, ma n’usoro nke ụbọchị anyị ma n’izu ụka anyị, dabere ma anyị ga-atụkwasị Chineke obi lekọta anyị ka anyị kwụsị ịrụ ọrụ. Isiokwu a nke mmasi n’etiti ịdabere na Chineke na nnwere onwe pụọ n’ebe Chineke nọ na ndị ọzọ Ọ na-enye bụ usoro dị oke mkpa na-esite n’ozi ọma n’ime Akwụkwọ Nsọ niile. Ezumike nke izu ike chọrọ nkwenye anyị na Chineke na-achịkwa ma anyị anọghị yana idebe izu ike nke izu ike na-abụ ngosipụta na mmemme nke ndokwa a ọ bụghị naanị ịkwụsị ọrụ.
Ngbanwe a na nghọta nke izu ike dị ka ịdabere na Chineke na ịtụle maka ndokwa Ya, ịhụnanya na nlekọta na-emegide nchọnchọ anyị maka nnwere onwe, njirimara na ebumnuche site na ọrụ nwere mmetụta anụ ahụ dị mkpa, dị ka anyị kwurula, ma nwee isi mmụọ pụtara. . Njehie nke Iwu bụ echiche bụ na site n'ịrụsi ọrụ ike na ịgbalịsi ike m nwere ike idebe Iwu ahụ wee nweta nzọpụta m, mana dị ka Pọl kọwara na Ndị Rom 3: 19-20, ọ gaghị ekwe omume idebe Iwu ahụ. Ebumnuche nke Iwu ahụ abụghị ka e weta nzọpụta, kama ka e wee “mee ka ụwa dum zaa ajụjụ n’ihu Chineke: site n’ọrụ nile nke iwu ọ dịghị mmadụ ọ bụla a ga-agu n’onye ezi omume n’ihu ya; nke mmehie ”(Hib 3: 19-20). Ọrụ anyị enweghị ike ịzọpụta anyị (Ndị Efesọs 2: 8-9). Ọ bụ ezie na anyị chere na anyị nwere ike inwere onwe anyị ma ghara ịdabere na Chineke, anyị riri ahụ na ohu nke mmehie (Ndị Rom 6:16). Nnwere onwe bụ echiche efu, mana ịdabere na Chineke na-atụgharị n'ime ndụ na nnwere onwe site na ikpe ziri ezi (Ndị Rom 6: 18-19). Izu ike n’ime Onyenwe anyi putara idobe okwukwe gi na njirimara gi n’ime ndokwa ya, nke aru na ebighi-ebi (Ndi Efesọs 2: 8).
Izu ike n'ime Onye-nwe putara ịdabere kpam kpam na nduzi na atụmatụ Ya ọbụlagodi dịka ụwa na-agbagharị gburugburu anyị n'ọgba aghara oge niile. Na Mak 4, ndị na-eso ụzọ sooro Jizọs ma gee ntị ka ọ na-akụziri nnukwu ìgwè mmadụ banyere okwukwe na ịdabere na Chineke site na iji ilu. Jizọs ji ilu nke ọgha-mkpụrụ wee kọwaa otu ndọpụ uche, ụjọ, mkpagbu, nchekasị, ma ọbụnke Setan nwere ike igbochi usoro okwukwe na nnabata nke ozioma na ndụ anyị. Site na nkuzi a, Jizọs soro ndị na-eso ụzọ ya gaa ngwa ngwa site n'ụra n'ụgbọ ha n'oge ajọ ifufe. Ndi n disciplesso uzọ-Ya, ndi otutu nime ha bu ndi nwere azu, ma tua egwu, kpọtanu Jisus, si, Onye-nwe-ayi, don't cheghi na ayi nānwu? (Mak 4:38). Jizọs zara ha site n’ịbara ifufe na ebili mmiri mba nke mere na oké osimiri ahụ dajụrụ, na-ajụ ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Gịnị mere unu ji na-atụ ụjọ? Enweghi okwukwe? "(Mak 4:40). Ọ dị mfe inwe mmetụta dịka ndị na-eso ụzọ nke Osimiri Galili na ọgba aghara na oké ifufe nke ụwa gbara anyị gburugburu. Anyị nwere ike ịmata azịza ndị ziri ezi ma mata na Jizọs nọnyeere anyị n'oké ifufe ahụ, mana anyị na-atụ egwu na ọ chọghị ịma. Anyị na-eche na ọ bụrụ n’ezie na Chineke na-eche banyere anyị, Ọ ga-egbochi oke ebili mmiri anyị na-enweta wee mee ka ụwa dị jụụ ma dịrị jụụ. Oku nke izu-ike abụghị naanị oku na-atụkwasị obi na Chineke mgbe ọ dị mma, mana iji mata ịdabere kpamkpam na Ya n'oge niile na Ọ na-achịkwa mgbe niile. Ọ bụ n’oge ebili mmiri ka a na-echetara anyị adịghị ike anyị na ịdabere na ya site na ndokwa Ya ka Chineke gosipụtara ịhụnanya Ya. Izu ike n'ime Onyenwe anyi putara na anyi kwusi ime nnwere onwe anyi, nke abaghi ​​uru obula, na itukwasi obi na Chineke huru anyi n'anya ma mara ihe kacha mma maka anyi.
Gịnị mere izu ike ji dị Ndị Kraịst mkpa?
Chineke setịpụrụ ụkpụrụ nke abalị na ehihie na ụda olu nke ọrụ na izu ike tupu ọdịda ahụ, na-eke usoro ndụ na usoro nke ọrụ na-eweta nzube na omume mana ọ pụtara site na mmekọrịta. Mgbe ọdịda ahụ gasịrị, mkpa anyị maka owuwu a bukwara ibu karịa ka anyị na-achọ ịchọta nzube anyị site na ọrụ anyị na nnwere onwe anyị pụọ na mmekọrịta anyị na Chineke. anyị na-atụ anya ka mweghachi na mgbapụta nke ahụ anyị “nwere onwe ya pụọ ​​n'agbụ ya nke ire ure ma nweta nnwere onwe nke ebube nke ụmụ Chineke” (Ndị Rom 8:21). Obere atụmatụ izu ike a (izu ike) na-enye anyị ohere iji tụgharịa uche n'onyinye nke ndụ, nzube na nzọpụta nke Chineke. nzoputa dika nke ozo no nke Chineke.Anyi apughi irite nzoputa nke anyi, mana o bu site na amara ka azoputara anyi, obughi site na aka anyi, kama dika onyinye sitere na Chineke (Ndi Efesos 2: 8-9). Anyi zuru ike n’amara Chineke n’ihi na oru nke nzoputa anyi n’elu obe (Ndi Efesos 2: 13-16). Mgbe Jizọs sịrị, “O gwụwo” (Jọn 19:30), O nyere okwu ikpeazụ banyere ọrụ mgbapụta. Thebọchị nke asaa nke okike na-echetara anyị mmekọrịta dị mma anyị na Chineke, na-ezu ike na ngosipụta nke ọrụ Ya maka anyị. Mbilite n’ọnwụ nke Kraịst guzobere usoro okike ọhụrụ, na-agbanwe echiche site na njedebe nke okike wee zuo ike ụbọchị izu ike gaa na mbilite n’ọnwụ na ọmụmụ ọhụụ n’ụbọchị mbụ n’izu. Site na okike ohuru anyi na-ele anya na Satọde na-abịanụ, ezumike ikpeazụ nke anyị na-anọchite anya ndị na-ese onyinyo Chineke n'ụwa weghachitere ya na eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ (Ndị Hibru 4: 9-11; Mkpughe 21: 1-3) .
Ọnwụnwa anyị taa bụ otu ọnwụnwa ahụ enyere Adam na Iv n'ime Ogige Ubi, anyị ga-atụkwasị obi na ndokwa nke Chineke ma lekọta anyị, dabere na Ya, ma ọ bụ na anyị ga-anwa ịchịkwa ndụ anyị site na nnwere onwe na-enweghị isi, na-aghọta ihe ọ pụtara site na iwe anyị. na ike ọgwụgwụ? Omume izu ike nwere ike ịdị ka ihe okomoko na enweghị atụ na ụwa anyị nọ n'ọgba aghara, mana njikere anyị inyefe usoro nke ụbọchị na usoro izu ahụ maka Onye Okike na-ahụ n'anya na-egosi ịdabere na Chineke maka ihe niile, nke anụ ahụ na nke ebighi ebi. Anyị nwere ike ịmata mkpa anyị nwere maka Jizọs maka nzọpụta ebighi ebi, mana rue mgbe anyị ga-akwụsị ịchịkwa njirimara anyị na omume anyị na omume anyị, mgbe ahụ anyị anaghị ezu ike n'ezie ma tụkwasị ntụkwasị obi anyị na Ya. ụwa gbagọrọ agbagọ n'ihi na ọ hụrụ anyị n'anya nakwa n'ihi na anyị pụrụ ịdabere na ya. "Not maghị? Did nughi? Ebighi ebi bu Chineke ebighi ebi, Onye kere ihe na njedebe nke uwa. Ọ naghị ada ada ma ọ bụ ike agwụ; Agaghị enweli nghọta ya nghọta. Ọ na-enye ndị na-adịghị ike ike, ọ na-emekwa ka ndị na-enweghị ike nwekwuo ume ”(Aịzaya 40: 28-29).